Tesla သည် ကုန်စည်အတွက် Dogecoin ငွေပေးချေမှုများကို စတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သော်လည်း ဖမ်းမိခဲ့သည်။ - Token Myanmar
Tesla သည် ကုန်စည်အတွက် Dogecoin ငွေပေးချေမှုများကို စတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သော်လည်း ဖမ်းမိခဲ့သည်။
Tesla အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Elon Musk က Tesla သည် ယခုအခါ Dogecoin ကို လက်ခံလိုက်ပြီဟု ကြေညာခဲ့သည်။DOGE) ကုမ္ပဏီ၏ ကုန်ပစ္စည်းအတွက် ပေးချေမှုအဖြစ်။ Tesla စတိုးရှိ DOGE အရည်အချင်းပြည့်မီသော ထုတ်ကုန်များကို Tesla ၏ Dogecoin ပိုက်ဆံအိတ်သို့ DOGE ပေးပို့ခြင်းဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
၎င်းသည် DOGE ကိုလက်ခံနေချိန်တွင်၊ ကုမ္ပဏီသည် ၎င်းတို့သည် အခြား crypto ကိုမယူကြောင်းကိုလည်း ရှင်းလင်းခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီ ပြည်နယ်များ အခြားပိုင်ဆိုင်မှုများကို သိရှိနိုင်သော်လည်း ၎င်း၏ဝဘ်ဆိုဒ်ရှိ DOGE။ လုပ်ငန်းသည် "Tesla သို့ပေးပို့သော Dogecoin မဟုတ်သော ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ဝယ်ယူသူထံ ပြန်ပေးမည်မဟုတ်ကြောင်း လုပ်ငန်းက သုံးစွဲသူများအား ပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့အပြင် DOGE ဖြင့်ဝယ်ယူထားသောပစ္စည်းများကို "ပြန်မရနိုင်ပါ၊ လဲလှယ်ခြင်း သို့မဟုတ် ပယ်ဖျက်ခြင်းမပြုနိုင်ပါ။" Tesla သည် DOGE မှတစ်ဆင့် ပြုလုပ်သော ရောင်းချမှုအားလုံးကို ငွေသားဖြင့် လဲလှယ်၍မရသော အပြီးသတ်အဖြစ် သတ်မှတ်သည်။
Dogecoin ဖန်တီးသူ Billy Markus သည် Dogecoin အသိုက်အဝန်းကို စုစည်းကာ ကြေညာချက်ကို ချက်ချင်းပြန်ကြားခဲ့သည်။ "ကောင်းပြီ Dogecoin အသိုင်းအဝိုင်း၊ မင်း ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာ သိတယ်" Markus တွစ်တာတင်ခဲ့သည်။.
အသိုင်းအဝိုင်းက တုံ့ပြန်မှု မြန်ဆန်တယ်။ အချို့က DOGE ကို အသုံးပြု၍ ပစ္စည်းများကို ဝယ်ယူပြီးဖြစ်ကြောင်း တွစ်တာတွင် ရေးသားခဲ့သည်။ ကြေငြာပြီး မိနစ်အနည်းငယ်အကြာတွင် Twitter အသုံးပြုသူ Dogecoin_GER ဖြစ်နေပါပြီ။ တင်ထားတယ်။ "ဂျာမနီသို့သွားရာလမ်းတွင် Tesla Tequila!" ဟူသော သူ၏အမှာစာ၏ အွန်လိုင်းစခရင်ပုံတစ်ခု။
လွန်ခဲ့သည့်တစ်လက Tesla က ၎င်းတို့လုပ်ဆောင်မည်ဟု အတည်ပြုခဲ့သည်။ DOGE ကိုစတင်လက်ခံပါ။ ကုန်ပစ္စည်းအတွက်။ ကြေငြာချက်ကြောင့် ထိုအချိန်တွင် meme coin အတွက် 25% စျေးနှုန်း မြင့်တက်ခဲ့သည်။ ယနေ့၊ DOGE ငွေပေးချေမှုများကို အကောင်အထည်ဖော်ပြီးနောက် နာရီအနည်းငယ်အကြာတွင်၊ ပိုင်ဆိုင်မှု၏စျေးနှုန်းသည် 18.63% တက်လာသည်ကို ပြသသည်။
ဒီဇင်ဘာလက ပြန်ရောက်တယ်။ ဘီလီယံနာက သူ့အတွေးကို ထုတ်ဖော်ခဲ့သည်။ DOGE သည် Bitcoin နှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းအကြောင်း။ Musk ၏ အဆိုအရ "၎င်းကို ရီစရာ ပြက်လုံးတစ်ခုအဖြစ် ဖန်တီးထားသော်လည်း Dogecoin သည် ငွေပေးငွေယူအတွက် ပိုသင့်တော်ပါသည်။" DOGE သည် အနည်းငယ်ဖောင်းပွနေပြီး ၎င်းသည် လူများအား တန်ဖိုးရှိသော စတိုးဆိုင်အဖြစ် အသုံးပြုမည့်အစား ၎င်းအား သုံးစွဲရန် အားပေးသည်ဟု ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
ဤအတောအတွင်း Tesla သည် ယခုနှစ်အတွင်း crypto ငွေပေးချေမှုများကို စတင်အကောင်အထည်ဖော်သည့် တစ်ခုတည်းသောကုမ္ပဏီမဟုတ်ပေ။ Visa မှ ကောက်ယူသော စစ်တမ်းတစ်ခုတွင် အသေးစားနှင့် အလတ်စားလုပ်ငန်းများကိုလည်း သတ်မှတ်ပေးထားကြောင်း ဖော်ပြသည်။ crypto ငွေပေးချေမှုများကိုလက်ခံရန် 2022 မှာ
ဖောင်ဒေးရှင်းအနီးတွင် Web3 လက်ခံမှုကို အားကောင်းစေရန် $150 သန်း တိုးသည် – Altcoins Bitcoin သတင်း
တစ်စုံတစ်ယောက်သည် အခကြေးငွေများ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရန် ကြိုးစားနေသည့် $135K မတော်တဆ ဆုံးရှုံးသွားသည်။